Mairelay: Isixhobo sokwenza imikhankaso yeendaba | Iindaba zeGajethi
Unokuba nenkampani yakho okanye usebenze kwisebe lezorhwebo okanye lentengiso kwinto enye. Indlela eqhelekileyo yokunxibelelana nabaxumi yile yazisa ngemikhankaso ye-imeyile. Banokuba ngamaphulo, ukuthumela incwadana yeendaba okanye ukulawula uluhlu lwababhalisi bakho. Kolu hlobo lwesenzo udinga isixhobo esiya kuthi xhaxhe, ngenxa yoko iMailrelay lukhetho olunokuba nomdla kuwe.
I-Mailrelay sisixhobo esiya kuthi sikwazi ukusisebenzisa lawula imikhankaso yethu yokuthengisa nge-imeyile. Inika ithuba lokwenza incwadana, lawula ngcono ubume bemikhankaso eneenkcukacha-manani okanye ukulawula uluhlu lwethu lwababhalisi. Isixhobo esipheleleyo nesinomdla kakhulu.
Kwakhona, Ngoku bakhupha ingxelo entsha yesi sixhobo. Ihlaziyiwe ukuze sikwazi ukuyisebenzisa kakuhle kwaye inemisebenzi eyongezelelweyo eyongezelelweyo. Ke ngoko, inikwe njengeyona ndlela igqibeleleyo ngolu hlobo, esiza kukuxelela ngalo apha ngezantsi.
1 Imeyileli ikhupha ingxelo entsha
2 Zonke iinkalo kwiakhawunti enye yasimahla
Imeyileli ikhupha ingxelo entsha
Inkampani ithathe isigqibo sokuphucula isixhobo sayo, ngotshintsho olukhulu. Uyilo lwemeyile luhlaziyiwe ngokupheleleyo, kuba enye kulula ukuyisebenzisa, ebonakalayo kakhulu kwaye evumela ukuba imisebenzi ethile yenziwe ngendlela elula. Inxalenye ebalulekileyo kwinkampani.
Kuyilo, siyayibona loo nto kwaziswe idashboard entsha ngemenyu ephezulu, apho sinokubona isishwankathelo semikhankaso yamva nje, ukuze sikwazi ukuyilawula sele ikwisikrini esikhulu. Isixhobo senziwe ngokutsha ngokupheleleyo kwaye saphuculwa, ke ukusetyenziswa okuthe kratya kuye kwacingelwa. Ukongeza, sifumana imisebenzi emitsha, efumaneka kwiakhawunti yasimahla.
Ngokomzekelo, Iposi inomrhumo omtsha wokutsala kunye nolahlo. Enkosi ngayo, kulula ukuyila iileta. Ukongeza, kuyo sifumana iibhloko zonxibelelwano lwentlalo, ividiyo, isicatshulwa, amaqela emifanekiso, iikholamu, ezisinceda ukuba senze iphulo elipheleleyo. Iinkcukacha ezibalulekileyo kukuba ngoku sinethuba lokuhlulahlula le mikhankaso, ukukwazi ukukhetha phakathi kweendlela ezahlukeneyo. Ngaphandle kwamaqela ngendlela yesiko, sikwanamacandelo amatsha anamandla, ukufikelela kubaphulaphuli abaninzi ngeli phulo.
Xa sisenza iphulo, manani zibalulekile. Yenye yeendawo apho iMailrelay iphucule ngokucacileyo. Basinika ulwazi oluthe kratya, ukongeza ekwenzeni ngexesha lokwenyani, eliza kusivumela ukuba sibe nalo lonke ulwazi olubalulekileyo malunga namaphulo. Ngabaphi ababhalisi abayivulileyo imeyile, nini, phi, ngubani onqakraza kwikhonkco. Lonke ulwazi onokulinganisa ngalo impumelelo yephulo ngendlela elula kakhulu. Ukufikelela kulwazi ngaphandle kwamathandabuzo yenye into ebalulekileyo.
Zonke iinkalo kwiakhawunti enye yasimahla
Xa kufuneka sisebenzise olu hlobo lwesixhobo emsebenzini, nokuba yinkampani yethu okanye umntu wesithathu, into eqhelekileyo kukuba kufuneka sihlawule imali ukuze siyisebenzise. Ayisiyo imeko kaMairelay, sinako Sebenzisa ngawo onke amaxesha ngeakhawunti yasimahlaUkongeza ekubeni simahla ngokwenyani, ngaphandle koshicilelo oluncinci.
Zonke izinto esizikhankanyileyo ngasentla ziyafumaneka kwiakhawunti yakho yasimahla. Sinokuzisebenzisa ngalo lonke ixesha, ukongeza ekubeni sinenkxaso eqinisekisiweyo evela kwinkampani, ukuba kwenzeka into ethile okanye sinokuthandabuza ngokusebenza kwale misebenzi. Akukho mda kuthumelo lwemihla ngemihla lwephulo okanye incwadana yeendaba. Ukuba sifuna ukuthumela ngaphezulu kwesinye ngosuku ngaphandle kwengxaki.
Ke ayothusi loo nto I-Mailrelay lukhetho oludumileyo phakathi kweenkampani. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngesi sixhobo nayo yonke into ekubonelela ngayo kwiwebhusayithi yayo, uya kuba nakho ukwazi okungakumbi ngesi sixhobo, imisebenzi yaso kunye nendlela yokusibamba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Imeyileli: Isixhobo sokwenza iphulo lakho lokuthengisa nge-imeyile